Delta Mhepo Lines: Vese vasina kuvharirwa vashandi vanozobhadhariswa madhora mazana maviri einishuwarenzi yehutano pamwedzi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Delta Mhepo Lines: Vese vasina kuvharirwa vashandi vanozobhadhariswa madhora mazana maviri einishuwarenzi yehutano pamwedzi
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Health News • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Delta Mhepo Lines CEO Ed Bastian
Mumavhiki apfuura kubva pakasimuka kweiyo B.1.617.2 musiyano, vese vashandi veDelta avo vakaiswa muchipatara neCOVID havana kubayiwa zvakakwana.
Delta kubhadharisa vasina kuvharirwa vashandi kuwedzerwa kune hutano hunobatsira.
Delta inishuwarenzi nyowani yehutano inosvika munaNovember 1.
Avhareji yekugara muchipatara kwe COVID-19 yakadhura Delta $ 50,000 pamunhu.
Delta Air Lines yazivisa nhasi kuti vese vashandi vendege vasina kunyatsojekerwa COVID-19 vachatobhadhara mamwe madhora mazana maviri pamwedzi kuitira inishuwarenzi yehutano.
Chirevo chevakuru veDelta Air Lines kuvashandi vakati "mari yekuwedzera ichafanirwa kugadzirisa njodzi yezvemari danho rekusabaya jekiseni riri kugadzirira kambani yedu."
Maererano ne Delta Chief Executive Ed Bastian , "kugara muchipatara kweECVID-19 kwakadhura Delta $ 50,000 1.617.2 pamunhu" uye "mumavhiki apfuura kubva pakamuka chinhanho cheB.XNUMX, vashandi vese veDelta vakaiswa muchipatara neCOVID havana kubayiwa zvakakwana."
Kunyangwe 75% ye Delta Air vashandi vakabayiwa nhomba yehutachiona, Bastian akataura kuti "hukasha" hwe COVID-19's Delta musiyano "zvinoreva kuti tinofanirwa kuwana vazhinji vevanhu vedu vabaiwe, uye kusvika padyo ne100 muzana sezvinobvira."
Shanduko dzinozotanga kushanda kubva munaNovember 1, nepo, kubva munaGunyana 12, vashandi vasina kubayiwa vachena vachatora bvunzo dzeCVVID-19 vhiki nevhiki. Vashandi vasina kuvharirwa vanofanira kuwedzera kupfeka masikisi emeso mumba.
Veruzhinji nevemaindasitiri vanoita kusarudzo yendege yakanga yakavhenganiswa. Vamwe vakarumbidza danho reDelta, vachiti yaive "yakakodzera" nzira yekukurudzira kubaiwa uye inogona kuita "mutsauko chaiwo."
Vamwe, zvakadaro, vakayambira kuti zvinogona kumisikidza zvakaipa zvichiti danho iri rakazoguma nekukara kwemari, kwete kuva neruzhinji.
Mamwe ndege, kusanganisira United Airlines, Air Canada neQantas yeAustralia, ari kuita nhomba yekurwisa COVID-19 inosungirwa kuvashandi.
Pakutanga kwemwedzi uno, CEO weUnited States, Scott Kirby uye Mutungamiri Brett Hart vakaudza vashandi kuti, kunyange hazvo vachiziva kuti vamwe vashandi havangabvumirane nesarudzo iyi, "munhu wese akachengeteka kana munhu wese abayiwa nhomba."